के तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? « Nepal Bahas
के तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ?
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७६, शनिबार ०७:३४
पेटमा हुने एकप्रकारको इन्फेक्सनलाई अम्लपित्त अर्थात् ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । हाम्रो पेटमा एक किसिमको एसिड ‘अम्ल’ उत्पादन हुन्छ, जसले खाना पचाउनेदेखि खानासँगै पेटमा गएका ब्याक्टेरियालाई मार्नेसम्मको काम गर्छ । यदि, पेटमा अम्ल उत्पादन बढी भएमा त्यसले तन्तु जलाउँछ । जसलाई सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भएको भनिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक हुनुको प्रमुख कारण खानपानमा गडबडी नै हो । जे पायो त्यही खाने, कहिले धेरै खाने वा खाना नै नखाने, बढी मसालेदार खाना खाने गर्नाले ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ । त्यस्तै, धेरै तारेको खानेकुरा खाने गर्नाले पनि ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । फास्टफुड र जंकफुडको अत्यधिक सेवनबाट समेत ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ ।
दीर्घरोगका लागि सेवन गरिने कतिपय औषधि पनि ग्यास्ट्रिकको कारक हुन सक्छ । खासगरी पेनकिलर बढी खाएमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ, लागुपदार्थ र मदिरा सेवनका कारणसमेत ग्यास्ट्रिक हुन्छ । कहिलेकाहीँ तनावका कारणले समेत यस्तो समस्या देखिन्छ । पेटको र खाद्यनलीको क्यान्सरले पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
समयमा खाना खाने वा सन्तुलित आहार गर्ने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ ।
यसबाहेक अत्यधिक चिल्लो, पिरो र अमिलो खानेकुरा नखाने अर्थात्
साधारण खानाको सेवनले ग्यास्ट्रिक हुनबाट बचाउँछ ।
रक्सी, चुरोटजस्ता पदार्थको सेवन नगर्ने र चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र पेनकिलर खाने गर्नाले यसबाट बच्न सकिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक बिग्रिएमा अल्सर र क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ । अल्सरका कारण अत्यधिक रक्तश्राव भएर मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । पछिल्लो समय बजारमा राम्रो गुणस्तरको औषधि पाइने भएकाले ग्यास्ट्रिकको समस्या पहिलेभन्दा निकै कम
भएको पाइन्छ ।
ग्यास्ट्रिक भएको सुरुवाती चरणमैै खानपान व्यवस्थित र औषधि सेवन गर्ने हो भने यो समयमै निको पार्न सकिन्छ । इन्डोस्कोपीबाट चेकजाँच गरी ग्यास्ट्रिकको चरण पत्ता लगाएर उपचार गरिन्छ । सुरुको चरणमा एसिड उत्पादन कम गर्ने औषधिको सेवनबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
अल्सर भएमा रक्तश्रावले समस्या आउने भएकाले छुट्टै उपचार गरिन्छ । यसबाहेक क्यान्सर नै भइसकेको चरणमा शल्यक्रियाका माध्यमबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै ’कार्यक्रम लागू गरिने
सत्यमोहन जोशीलाई मानार्थ महाविद्यावारिधिको सम्मान